Wells Fargo anofunga kuti iyo iPhone 7 ichatengesa zvakanaka | IPhone nhau
Wells Fargo inopesana neMing-Chi Kuo: iPhone 7 inobatsira kusimudzira kutengesa
Nenyaya dzese, 2016 rinenge riri gore rekutanga iro iPhone ichaona kutengesa kwayo kudzikira kubva pakaunzwa chizvarwa chekutanga muna 2007. Muongorori ane mukurumbira weApple, Ming-Chi Kuo anotofungidzira 2016 yakaipa kupfuura 2014, gore iro apple foni yakakura kubva pamasendimita mana eiyo iPhone 4s kusvika kune 5 uye 4,7 inches yeiyo iPhone 5.5 uye iPhone 6 Plus zvakateedzana. Asi pane muongorori we Wells Fargo kuti haubvumirane zvachose.
Muongorori anonzi Maynard Um uye aendesa chirevo kuvashambadzi vake umo anoti iyo iPhone 7 ichaita kuti kutengesa kweiyo iPhone kuwedzere mukota yekupedzisira ya2016. Kuti ive chaiyo, Um inoti Apple ichatengesa 82.2 mamirioni mayuniti mumwaka wezororo weKisimusi. Kunyangwe zviine musoro kuti tinotenga zvakawanda mumwaka weKisimusi, zvinopfuura mamirioni makumi masere emayuniti mukota zvakanyanya kupfuura zvinotarisirwa nemunhu wese paWall Street.
Sekureva kwa Wells Fargo, iyo iPhone 7 ichatengesa zvakanaka
Muongorori we Wells Fargo anotenda izvozvo Wall Street haina tariro mukufungidzira kwavo nezve iPhone 7. Wall Street inotarisira kuti mamirioni makumi mashanu emaPhones achatengeswa mukota yekutanga yaKurume, inova 50% yakaderera pane zvaitarisirwa neUm kukota yekupedzisira. Kune rimwe divi, Ming-Chi Kuo anoti iyo iPhone 50 haizosanganisi chero chinhu chinopenya icho, pamwe chete nechidiki dhizaini dhizaini, chinoita kuti vashandisi vafunge kaviri pavanomutsiridza chishandiso chavo.
Nhasi iyo chikamu chekota yekutanga yezvemari kubva kuApple. Zvichava zvinonakidza kuona kana kudzikira kwekutengesa uko Wall Street inotarisira kwatotanga kana kuti iyo iPhone SE yakashanda kunonotsa zvishoma kutengesa kwakaderera uko munhu wese anotarisira. Pamusoro pezvo, zvinoramba zvichionekwa kana vachipa data rekutengesa reApple Watch kana kuramba vachiisa smartwatch muchikamu che "Vamwe" uye nechizvarwa chechina Apple TV yakatengeswa muna Gumiguru 2015. Tichakurumidza kubuda zvekusahadzika kupi zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Wells Fargo inopesana neMing-Chi Kuo: iPhone 7 inobatsira kusimudzira kutengesa
Apple inoburitsa yechitatu beta yeIOS 9.3.2 yevagadziri
Iyo MacBook 12 "nyowani iri pakati pe5% ne18% nekukurumidza